जानकारी Archives - Page2of4- All Nepal
गर्मि मौसममा कस्तो लुगा लगाउनु अति उत्तम हुन्छ त : जानकारी लिनुहोस
काठमाडौं, २९ चैत– गर्मीको मौसम शुरु भएको छ । दिनहुँ तापमान बढ्दैछ । जति गर्मी बढ्यो, उत्तिनै आफ्नो लुगा बोझिलो लाग्छ । पसिना र धूलो–धुँवाले शरीरमा गन्ध आउन थाल्छ । यावत् समस्याबाट कसरी पार पाउने ? कस्तो पहिरन लगाउने ? कसरी कुल देखिने ? यो चिन्ता तपाईंमा पनि छ भने अपनाउनुस यी उपाय । -अहिलेको […]
लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नुहोस है नत्र यस्ता घातक रोग लाग्छन लामखुट्टेको टोकाईबाट
विशेषगरी तराईमा गर्मीयामसँगसँगै लामखुट्टेको हैरानी पनि शुरु हुन्छ । वरपर लामखुट्टेको आवाज सुनेमा मानिस इरिटेड हुन थाल्छन् । यसको टोकाइले पनि मानिसलाई पीडा दिने गर्छ । लामखुट्टेको टोकाइले पीडा मात्र नभएर खतरनाक रोग पनि लाग्ने गर्छ । यसको टोकाइ खतरनाक हुनुको कारण हो, ब्याक्टेरिया, भाइरस र प्यारासाइट्स, जसले मनिसलाई बिरामी बनाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका […]
यदि तपाई यहि बैशाखमा नै लगन गाँठो कस्दै हो भने यो जानकारी अवश्य पढ्नुहोला
बिहे जीवनको एउटा महत्वपूर्ण मोड यसकारण पनि हो कि, त्यही मोडबाट हाम्रो गृहस्थी जीवन सुरु हुन्छ । अर्थात यो जीवनको सुरुवात पनि हो । ठीक यही मोडबाट हामी एक्लो रहँदैनौं । कुनै विपरितरलिंगीसँग हामी एकाकार हुनुपर्छ । हाम्रा खुसी, सुख, दुख, पीडा सबै एकाकार हुनुपर्छ । पति र पत्नीको रुपमा एकअकाको अस्तित्व स्विकार्नुपर्छ । एकअर्काको […]
गर्मि मौसम छ तपाई हामिले थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ : पानी कति र कसरी पिउने
शरीरमा पानीको कमीले एलर्जीको समस्या हुन सक्छ । एलर्जीले शरीरलाई भयानक असर पुर्याउन सक्छ । दैनिक कम्तीमा ८ गिलास पानी पिउनुस् । बैशाख महिना सुरु भइसकेको छ । काठमाडौंमा पनि हामीले गर्मीको महसुश गर्न थालिसकेको अवस्थामा तराईका जिल्लाहरुमा झन्् गर्मी बढ्दो छ । गर्मीको समयमा पानीको कमीका कारण एलर्जीको समस्या धेरैमा हुने गर्छ । पानी […]
तपाईकी गर्लफ्रेण्ड वा श्रीमति रिसाइन भने यसरी २ मिनटमै फकाउनुहोस : सजिला तरिका हरु
हिजोआज केटाहरूको गर्लफ्रेन्ड हुनु र केटीहरूको ब्वाइफ्रेण्ड हुनु सामान्य भइसकेको छ । केटा र केटीबीचको भावनात्मक अन्तरका कारण उनीहरूको स्वभावमा पनि केही पृथकता पाउन सकिन्छ । विशेषगरी केटाहरूको गुनासो हुने गर्छ- गर्लफ्रेन्ड रिसाएर टेन्सन भो । हुनत प्रेममा रिसाउनु र फकाउनुको मजा नै विशेष हुन्छ तर भर्खर-भर्खर प्रेमसम्बन्धमा परेका ठिटाहरूलाई गर्लफ्रेन्ड फकाउने कला थाहा नहुन […]
कतै तपाईलाई यौनाङ्ग चिलाउने समस्या त छैन समयमै यसरी घरेलु उपार गर्नुहोस है नत्र पछुताउनु पर्ला
योनी मार्गमा हुने संक्रमणले धेरै महिलाहरुलाई सताउने गर्दछ । तर यो एक सामान्य विषय हो । जसको कारण धेरै हुन सक्छन् । योनी मार्गको नियमित सफाइनै यस प्रकारको संक्रमणवाट बच्ने प्रमुख उपाय हो । यो स्वभाविक समस्याका लागि स्वास्थ्य संस्था धाइरहनु पर्ने झन्झट भने छैन । होस गरेर घरमै यी उपाय उपनाए यस प्रकारको संक्रमणबाट […]
आफ्ना वालवालिकाहरुलाई वैशाख ६ र ७ गते भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाऔ
भिटामिन ‘ए’ को बारे जान्नै पर्ने कुरा सरकारले देशभर पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई विहीबार र शुक्रबार भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले उक्त अभियानलाई सक्रियताका साथ सहयोग गरिरहेका पनि छन् । तर कतिपय अभिभावकमा भिटामिन ए नखुवाए के नै हुन्छ र भन्ने सोच छ । […]
समयमै थाहा पाइराखौ हृदयघात हुनुभन्दा अगाडी नै देखिने केही लक्षणहरु यस्ता छन्
काठमाडौँ । हृदयघात अहिलेको समयमा धेरै मानिसमा देखिने समस्या हो । शारीरिक व्यायामको कमी , खानपानमा लापरवाही , तानाव जस्ता समस्याले गर्दा हृदयघातको बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । हृदयघातको लक्षणहरु देखा परिरहने भए पनि हामी त्यसलाई वास्ता गर्ने गर्दैनौं । जसले गर्दा हामीलाई पछि समस्या आउने गर्छ । हृदयघात भएको समयमा तुरुन्तै उपचार गर्न […]
विवाहित महिला पुरुषले थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ : वैवाहिक जीवन कसरी सुमधुर बनाउने ?
वैवाहिक जीवनमा सुख एव प्रेमका लागि श्रीमान्श्रीमतीका बीच समझदारी आवश्यक छ । वैवाहिक जीवन सुखी र शान्त हुनु भनेको पृथ्वीमै स्वर्गको भोग गर्नु हो । हिजोआज अधिकांश व्यक्तिको वैवाहिक जीवनबाट शान्ति हराएको पाइन्छ । समयसँगै श्रीमान्श्रीमतीबीचको प्रेम समेत कम हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा केही उपाय अपनाएर वैवाहिक सम्बन्धमा मधुरता ल्याउन सकिन्छ ः -श्रीमान्श्रीमती […]
के अण्डा र केरा सगै खाएमा मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ त ? सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौ
हिजोआज सोसियल मिडियामा एउटा पोष्ट भाइरल भएको छ । अण्डा र त्यसलगत्तै केरा सेवन गरिएको केही सेकेण्डमै भारतका एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि उक्त पोष्ट सोसियल मिडियामा एकाएक भाइरल बन्दै गएको छ । उक्त पोष्टलाई आधार मान्ने हो भने अण्डा र केराको मिश्रणले पेटमा गएर विषको रूप लिने गर्दछ । जसका कारण मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ […]